Ywar Thar Lay (YTU): 11/1/09
အစပထမမှာတော့ ကြည်နူးရမယ်။ ပျော်ရွှင်ရမယ်။ ကျေနပ် နှစ်သိမ့်ရမယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ မုန်တိုင်းတွေလား ရွေးချယ်ခြင်းတွေ နာကျင်ခြင်းတွေ ဒါတွေက အချစ်ရဲ့ ရသတွေလား။
ဒီအတွေးတွေကို new moon ရုပ်ရှင်ကြည့်အပြီးမှာ ရလာခဲ့ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ဘ၀နှစ်ခု ပေါင်းစပ်ဖို့ ဆိုတာ အချစ်တွေ မစခင်မှာ ဘယ်သူမှ သတိမ၀င်လောက်ပါဘူး။ အချစ်ဆိုတာက သိမ်မွေ့လွန်းစွာ ဖျားယောင်းတတ်ဟန် တူပါရဲ့။ အရာရာတိုင်းကို ကိုယ်တိုင်နဲ့ ချိန်ထိုးတတ်တာမို့ ကျနော်ဆိုရင်ကောဆိုတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရင်ဆုံး မေးကြည့်မိတယ်။ သေချာပါတယ် ချစ်မိသွားတဲ့နောက် ကျနော် နောက်ဆုတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်လောက်တော့ပါဘူး။ ကျွံဝင်သွားတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေနောက်မှာ နောက်ဆုတ်ဖို့အတွက် ကျနော် မခံစားနိုင်တော့လို့ပါ။
ချစ်ခင်သူနဲ့ ခွဲခွာရခြင်းဆိုတဲ့ ခံစားချက်။ များသောအားဖြင့် ချစ်ခင်သူတွေနဲ့ ခွဲခွာခဲ့ဖူးသူတွေ ချည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အတိုင်းအဆ။ ဒီအတိုင်းအဆက ဘယ်လောက်အထိလေးနက်နိုင်မလဲ။ အချစ်က ဘ၀တစ်ခုလုံးမဖြစ်သင့်ဘူး အချစ်က ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်သင့်တယ်လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ဘ၀တစ်ခုလုံးစာ ချစ်ခဲ့တဲ့အချစ်ဆိုရင်ကော ဘယ်လိုဖြစ်သင့်သလဲ။ အတိမ်အနက်က စကားပြောမယ်ထင်ပါတယ်။
မတူညီတဲ့ဘ၀နှစ်ခုမို့ ချစ်လျက်နဲ့ ခွဲခွာဖို့ပြင်သူက ပြင်တယ်။ ကျွမ်းဝင်လျက်မို့ အသည်းတဆတ်ဆတ်နာ ဖျတ်ဖျတ်ခါလူးအောင် ခံစားသူက ခံစားတယ်။ ကောင်မလေးပြောသွားတဲ့ စကားလေးကို တဖွဖွခံစားရွတ်ကြည့်မိတယ်။ မင်းနဲ့အတူ အရာအားလုံး ပါသွားခဲ့ပြီတဲ့။ ဟုတ်မှာပါပဲ။ နေ့ရက်တိုင်းကို အကျိုးမဲ့ဖြတ်သန်းနေရမတဲ့လား။ ရူးမိုက်သူလို့ ဆိုချင်ဆိုပါတော့ ဒီနေရာမှာ သူမနဲ့ကျနော်ထပ်တူကျသွားခဲ့တယ်။
ထူးဆန်းတာက သူ့အရိပ် ဒီဝန်းကျင်ကနေ သူမ ထွက်ပြေးမသွားခဲ့တာပါ။ ကျနော်သာဆို ထွက်ပြေးမှာသေချာတယ်။ ဒီအငွေ့အသက် အရိပ်အယောင်တွေနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ အတတ်နိုင်ဆုံး မေ့ဖျောက်ဖို့ ကြိုးစားရမှာလေ။ ထားခဲ့သူကို တမ်းတပေမယ့် သူမှ ပြန်မလာချင်တော့ပဲ။
နောက်တော့ သူမအဖေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး သူမရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲဖို့ စတင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူမ မျှော်လင့်နေတာက သူ့အရိပ်အယောင်တွေပါပဲ။ အန္တရာယ် တစ်ခု မကျရောက်ခင်မှာ သူမကို သတိလာပေးမယ့် သူ့အရိပ်အယောင်တွေပါ။ အရိပ်အယောင်တွေရှာဖွေရင်း သူမ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံတွေ့ပြန်ရော။ သူမကို မထိခိုက်အောင် ကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီတစ်စုံတစ်ယောက်ကလည်း ပျောက်သွားခဲ့ပြန်ရော။
တစ်ကယ်တမ်းသူမတို့ သုံးပွင့်ဆိုင်က မြို့လေးနဲ့အတူရှိနေခဲ့တဲ့ ပုံပြင်လေးတစ်ခုလိုပါပဲ။ နောက်တော့ မခံမရပ်နိုင်တဲ့အဆုံး သူမ ကျောက်ဆောင်ပေါ်ကနေ အဆုံးသတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ ကျနော်ဆိုရင်ကော အဖြေကို စာဖတ်သူတွေ သိနေလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ကျနော် မဖြေတော့ပါဘူး။
ချစ်သူသေဆုံးပြီလို့ ထင်ထားတဲ့နောက် မသေနိုင်တဲ့ဘ၀တစ်ခု အထူးသဖြင့် ၁၇နှစ်မှာ ထာဝရ ရပ်တန့်နေတဲ့ ဘ၀ကနေ သူလည်း ချစ်သူနောက်ကိုလိုက်ပါဖို့ အဆင်သင့်ပြင်နေခဲ့ပြီတဲ့။ သတင်းစကားက အမှန်ကို အတိအကျမသိရသေးပင်မယ့် ချစ်သူမရှိတဲ့ ဒီကမ္ဘာမှာ မနေလိုတော့ပြီတဲ့လေ။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာမို့လား အပြင်မှာရော အခုလို ချစ်ခြင်းတွေ တည်ရှိနိုင်ပါ့မလား။
မတူညီတဲ့ ဘ၀နှစ်ခုကို တူညီအောင်လုပ်ဖို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလမ်းကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်လေ။ ချစ်သူနှစ်ဦးပေါင်းဖက်ဖို့ အတွက်ရွေးချယ်တယ်ဆိုတော့ သင့်မြတ်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။ မဟုတ်ရင် ကျွမ်းလျက်ကွာရမယ် မဟုတ်ပါလား။
ဒါပေမယ့် ရွေးချယ်ဖို့ကလည်း ခက်ခဲနေပြန်ရော။
ချစ်ခြင်းဆိုတာ ပူလောင်လိုက်ပါဘိတော့။ သို့ပါသော်လည်း လောင်ကျွမ်းဖို့အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပြန်တာမို့…………..
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 6:35 PM 26 comments Links to this post
ဖြူးဆရာတော်ဘုရား ဘဒ္ဒန္တနရပတိအား စင်္ကာပူမှ လှူဒါန်းငွေစာရင်း
အလှူငွေကောက်ခံသူ ဦးညီညီလွင်မှ ကောက်ခံရရှိငွေစာရင်းကို သာဓုအနုမောဒနာပြုနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုလာပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ ကောက်ခံရရှိငွေစုစုပေါင်းမှာ S$2396.00 ဖြစ်ပြီး 24-11-2009 အထိ အလှူစာရင်းကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
1. ကိုညီညီလွင် + မစန်းစန်းမြ မိသားစု 150.00 (13-11-09)
2. ဦးအောင်လွင် + ဒေါ်ခင်မိုးသွယ် မိသားစု 100.00 (14-11-09)
3. ကိုသက်ခိုင် + မခိုင်ခိုင်ဝင်း မိသားစု 150.00 (15-11-09)
4. ကိုအေးမင်းစိုး 50.00 (18-11-09)
5. ကိုကျော်နိုင်ဦး + မဆွေဆွေတင့် မိသားစု 70.00 (20-11-09)
6. ဦးစိန်မြင့် + ဒေါ်ကင်ကီး မိသားစု 50.00 (20-11-09)
7. ဦးမျိုးမြင့်မောင် + မမော် မိသားစု 50.00 (20-11-09)
8. မရွှေစင် နှင့် မနှင်းအိဖြူ 10.00 (20-11-09)
9. ဦးကျော်ထင် မိသားစု 100.00 (20-11-09)
10. မောင်မြတ်ဇော်သူ 10.00 (20-11-09)
11. မောင်ရန်နိုင်ဘို 50.00 (20-11-09)
12. မောင်ကျော်ကျော်လင်း 30.00 (20-11-09)
13. မယဉ်မင်းအောင် 50.00 (20-11-09)
14. ကိုအောင်မင်းနိုင် + မဖြူဖြူသင်း မိသားစု 150.00 (21-11-09)
15. မလဲ့လဲ့ဝင်း 10.00 (21-11-09)
16. မခိုင်ဇာမင်းနှင့် သူငယ်ချင်းများ 200.00 (21-11-09)
17.မရွှေစင် 100.00 (21-11-09)
18. ကိုကျော်မိုးခိုင် + မစန်းစန်းနု မိသားစု 50.00 (21-11-09)
19.မစိုးဝင်းတင် 100.00 (22-11-09)
20.မောင်အောင်ဇူလိုင် 30.00 (22-11-09)
21.မဥမ္မာမြတ်မင်း 30.00 (22-11-09)
22. ကိုဝဏ္ဏဇော် + မခင်ဆွေဝင်း မိသားစု 50.00 (22-11-09)
23.ကိုဝင်းမြတ်စိုး 100.00 (22-11-09)
24.မအေးချမ်းမိုး 150.00 (22-11-09)
25.စိုင်းဥာဏ်လင်းဆွေ 100.00 (22-11-09)
26.ကိုလင်းပြည့်စုံ + မဒါဒါ 50.00 (23-11-09)
27. စိုင်းသီဟအေး + မခင်စောမွန် မိသားစု 50.00 (23-11-09)
28. ကိုသန့်ဇင်ဟိန်း + မသူသူထက် မိသားစု 50.00 (23-11-09)
29.ကိုနေလင်း 22.00 (23-11-09)
30.ကိုအောင်မင်း 40.00 (23-11-09)
31.ကိုအောင်လင်း 40.00 (23-11-09)
32.မမေလင်းသန်း 40.00 (23-11-09)
33.အလှူရှင်နှစ်ဦး 142.00 (23-11-09)
34. ကိုရန်နိုင် + မနေခြည်ပွင့် မိသားစု 20.00 (23-11-09)
35.ကိုဘိုဘို 50.00 (23-11-09)
36.ကိုအောင်မြင့်ဦး မိသားစုး 52.00 (24-11-09)
အလှူငွေလက်ခံသူ ကိုညီညီလွင်နှင့်တကွ အလှူငွေ လှူဒါန်းသူများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ…
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 4:06 PM
ယနေ့ စိတ်အချဉ်ပေါက်လို့ ရေးတဲ့စာမို့ ဖတ်လို့ကောင်းမယ် မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေသိ ဒီနေရာမှာ တင်ချင်စိတ်ရှိလို့ တင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ညီမငယ်တစ်ယောက်ရေးတဲ့စာကို ရန်ကုန်တုန်းက ဖတ်ခဲ့ရဖူးတယ်။ တောင်းမယူထားလိုက်မိတာ နာတာပါပဲ၊ အမှတ်မိဆုံးစကားလုံးလေးက စေတနာဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့ မတန်ဖူး လို့မပြောလိုက်ပါနဲ့တဲ့။ စေတနာဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့ထိုက်တန်သတဲ့လေ။ ဟုတ်မှာပါ။ အဲ့ဒီလိုပဲ ကျနော်လည်း ခံယူမိတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း စေတနာတွေ ရေစီးကမ်းပြိုခဲ့မိတာပါ………………
လူတိုင်းကို ကိုယ်လို စိတ်သွင်းမိတယ်။ ငါ့တုန်းက ဒီလို အခက်အခဲတွေဖြစ်တာ ကြုံရတာ။ သူများတစ်ကာကို မဖြစ်စေချင်ဘူး။ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းအပေါ် နှုတ်၏စောင်မခြင်း လက်၏ စောင်မခြင်းဖြင့် ကူညီဖို့ သွန်သင်ခြင်းခံရတဲ့ စိတ်အခံလည်း ပါပါတယ်။ အမြင်မတော် ဆင်တော်နဲ့ခလောက်ကို ပြင်ဖို့ကြိုးစားတာက အကြိမ်ကြိမ်။ ကိုယ်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကြီးတော် နွား အလကားကျောင်းပေးခဲ့တာက အခါခါ။ ကျနော်ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီး ကျောက်စာတင်ဖို့ ၀ါသနာလည်း မပါ ပါဘူး။ ကျနော့ကို ဘာတွေပြန်လုပ်ပေးပါလို့လည်း မတောင်းဆိုပါဘူး။ အစကတည်းက ဘာကိုမှ ပြန်ရဖို့ မမျှော်လင့်ခဲ့လို့ပါပဲ။ မျှော်လင့်ခဲ့တယ်ဆိုလည်း မေတ္တာတရားကိုတော့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံပါရစေ။ အသွားအပြန်ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ကြုံလိုက်တိုင်း ပြန်လမ်းမဲ့ ဂူဖြစ်ဖြစ်နေတာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်ပဲ။
ကျေးဇူးဆပ်ဖို့ မလိုသလို ကျေးဇူးတင်ဖို့လည်း မလိုအပ်ပါဘူး။ တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ် ကျေးဇူးတော့ မကန်းပါနဲ့လို့ ဆိုပါရစေ။ အမြဲတမ်း ကိုယ်ကောင်းတယ်ဆိုပြီး ခေါင်းပေါ်ချီးတက်ပါချင်ကြတာချည်းမို့ပါ။ ကြုံလိုက်တဲ့အကြိမ်တိုင်း အမြဲစိတ်ပျက်အားလျော့မိတယ်။ စေတနာဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့မထိုက်တန်ဖူးလို့လည်း တွေးမိသွားတတ်တယ်။ လူတွေနဲ့ ဝေးရာမှာနေမယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်မိတာလည်း များလှပြီ။ လူတွေက ဒီလို စိတ်ရှိတယ် ဒီလိုမျိုးတွေချည်းပဲဆိုပြီး ဆုံးမမှုကို ခံရလိုက် နောက်တော့လည်း ခွေးမြီးကောက်ကျည်တောက်စွပ်သလို အရှေ့က မထော်မနန်းတွေကို မနေနိုင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ဟိုပါဒီပါ ပါလေရာဖြစ်နေပြန်တာမို့ ကျည်တောက်လည်း ကျွတ်ကော ဒုံရင်းအတိုင်းကောက်စမြဲလေ။
အခုနောက်ပိုင်းတော့ စေတနာစိတ်များ လျှော့လာသလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခံစားမိတယ်။ မြင်နေတာကို မြင်နေလျက် မသိချင်ယောင်ဆောင်ချင်လာတယ်။ စိတ်စေတနာပျက်ပြီဆိုရင် ခက်ကပြီ။ တော်တော့တန်တန်ဆို ဥပေက္ခာပြုချင်လာတယ်။ တကယ်တမ်း အဲ့ဒီစိတ်က ကောင်းတဲ့စိတ်မဟုတ်ပေဘူး။ ဘယ်သူတရားပျက်ပျက် ကိုယ်မပျက်နဲ့တဲ့ ။ဆုံးမတော့ အလွယ်သားနော် နာလွယ်ပြီးလိုက်နာရန်ခက်ခဲဘိခြင်း။ သူများကို မပြောခင်ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရင်မေးကြည့်စေချင်တယ် ကိုယ်တိုင်ဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာကိုပါ။
မသိမမြင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ မသိကျိုးကျွန်ပြုထားတာပါ။ လူပဲ ခံစားတတ်ပါတယ် နားလည်လွယ်ပါတယ်။ အပွေးမြင် အပင်သိသတဲ့။ နင်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကန်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ချက်ဆိုတာနဲ့ နားခွက်က မီးတောက်ပါတယ်။ ကူညီလိုက်လို့ အမြင့်တက်သွားတယ်ဆို တကယ့်ကို ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ ဘူးကောင်းလို့ စင်ခံရတာ စင်ကျိုးလည်း ဘူးသီးအလုံးလှရင် တကယ့်ကို မုဒိတာပွားပါတယ်။ ဘူးသီးလေးလို့ စင်ကျိုးတာ ဘာအရေးလဲနော့။ တမင်ချိုးရင်တော့ စင်ဖက်ကိုလည်း လှည့်ကြည့်သင့်ပါတယ်လေ။ အကူအညီမလိုတဲ့နောက် ဇော်ကန့်လန့်လို လုပ်လုပ်ပြနေတာတော့ မျက်စိနောက်မိတယ်။ အရှေ့ကနေ ငါကွဆိုပြီး လက်မထောင်နိုင်တဲ့အချိန်ဆိုရင် လှေကားထစ်တွေကို ပြန်ကြည့်ဖို့ မမေ့လျော့စေချင်ဘူး။ ဆင်သွားရင် လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုပေမယ့် လမ်းခင်းသူတွေရဲ့ စေတနာကို မမေ့လျော့သင့်ပါဘူး။ စေတနာ အသိအမှတ်မပြုရင်နေပါ ဒီလမ်းကို ဘယ်လိုနင်းဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာ အမှတ်ရရင်တော်ပါပြီ။ အခုတော့ ဘုရားပြီးလို့ ငြမ်းမဖျက်ခင်က တံတွေးထွေးပြီး နှပ်ချီးသုတ်ချင်နေကြပြီ။
ဒီစာသူငယ်ကလည်း ခဲမှန်ဖူးတာ အကြိမ်ကြိမ်ပေမယ့် နောင်တမဲ့လွန်းတယ်။ တစ်ခါမှန်လိုက် ပြန်ထူပြီးတိုင်း မူရင်းကို ပြန်ပြန်လုပ်နေမိတတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်ခါတော့ စေတနာပျက်ချင်မိတယ်။ စိတ်ကွက်ပြီး လှည့်မကြည့်တာမျိုးလည်း လုပ်မိတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တစ်ခါမှ သူတော်ကောင်း စိတ်ထားကောင်းတယ်လို့တော့ မကြွေးကြော်ဖူးသလို သူတော်ကောင်း ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်တွေကိုလည်း ဟုတ်မှန်ကြောင်းလိုက်စစ်ဆေးနေဖို့ ၀ါသနာမပါတာမို့ အေးအေးပဲနေမိတယ်။
ကိုယ်ကောင်းရင် ခေါင်းမရွေ့ဖူး ဆိုပြီး နေနေပေမယ့် ခေါင်းကို မရွှေ့ရွှေ့အောင်လိုက်လုပ်နေလို့ကတော့ ဘီလူးခေါင်းဆောင်းပြီး သွားဖြဲပြဖို့ ၀န်မလေးဖူးဆိုတာတော့ မမေ့ပါနဲ့လို့……………………
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 2:13 PM 31 comments Links to this post
ဆရာတော်ဘုရား ထိုင်းနိုင်ငံမှ ရန်ကုန်သို့ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ပြန်ကြွသွားပြီးနောက်
လက်ရှိ အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေတယ်လို့ သိရှိရကြောင်း ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်များအား အသိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
မနေ့က ဦးဇင်း ဦးဝိမုတ္တိသုခ ဆီကနေစာလာပါတယ်။ စာရရခြင်း စိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်မိတယ်။ ကျနော် မဟာစည်မှာ ကိုရင်ဝတ်စဉ်ကာလအတွင်း ဆရာတော်ရဲ့ တရားတော်များကို ဖလ်ယဉ်ဓမ္မာရုံမှာ နေ့စဉ်နာကြားခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာတော်ရဲ့ တရားတော်များကို နှစ်သက်မိလို့ ကိုရင်လူထွက်တော့ တရားတော်အခွေများကို မိဘတွေအတွက် ၀ယ်ယူပူဇော်မိတဲ့အထိပါပဲ။
ယနေ့ကိုညီညီလွင်နဲ့ စကားပြောရတဲ့အခါ ဆရာတော်ကို မြန်မာပြည်ပြန်ပင့်ဖို့ စီစဉ်နေကြောင်း ကြားသိရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကုသဖို့ အတွက် ဆွေးနွေးနေကြောင်း နှင့်အတူ စင်္ကာပူမှ ဆေးအလှူဒါန ပြုလိုသူများအတွက် ကိုညီညီက အလှူလက်ခံပြီး လှူဒါန်းပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကိုညီညီရဲ့ ဘဏ်အကောင့်က - POSB saving 245-68617-0
ဆက်သွယ်ရန် မေးလ်က - unyinyilwin@gmail.com
ဖုံးနံပါတ်က - ၉၀၀၉၆၈၂၀
အလှူငွေ လွှဲပြီးပါက မေးလ်ကို ဆက်သွယ်ပြီး မိမိ အလှူငွေ ဘယ်လောက်လွှဲထားကြောင်း အကြောင်းကြားပေးစေလိုပါတယ်။
ဆရာတော်ဘုရား ကျန်းမာရွှင်လန်းပြီး သာသနာ့အကျိုး ဆထက်ပိုးသယ်ရွက်နိုင်ဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်……
ကျေးဇူးတော်ရှင် နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကထိက ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး ရဲ့ သီလဂုဏ်၊ သမာဓိဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်တို့ နှင့် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် အားထုတ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုများကို အာရုံပြုကြည်ညိုနှလုံးသွင်း၍ အောက်ပါသတင်းစာသားကို ဓမ္မမိတ်ဆွေများ၏ ကိုယ်ပိုင် အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များနှင့် အီးမေးလ်များမှတဆင့် ထပ်ဆင့် ဖြန့် ဖြူးဝေမျှပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ကျေးဇူးတော်ရှင် နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကထိက ပြည်တွင်းပြည်ပသာသနာပြု ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တနရပတိ သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ ရှိ ဖလန်ကောက်ဆေးရုံ (PRARAM9HOSPITAL)၊ စတုတ္ထထပ် အတွင်းလူနာဆောင် အခန်းအမှတ် (၃)တွင် ကျောက်ကပ်ရောဂါဝေဒနာကို ဆေးကုသမှုခံယူလျှက်ရှိနေပါသည်။
ဆရာတော်သည် လွန်ခဲ့သော ၂-နှစ်က ကျောက်ကပ်အစားထိုးခဲ့ရာမှ ကျောက်ကပ်သို့ ပိုးဝင်ရောက်မှုကြောင့် ယခုအချိန်တွင် အရေးပေါ်ကုသမှုခံယူလျှက်ရှိပါသည်။
ဆေးရုံတွင် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ခေတ်မှီစက်ကိရိယာများဖြင့် ကုသလျှက်ရှိရာ ကုသစရိတ်မှာ တစ်ရက်လျှင် ကျပ်သိန်း(၃၀)ခန့် ကုန်ကျလျှက်ရှိပါသည်။ ယခုအချိန်အထိ ကုန်ကျငွေမှာ ကျပ်သိန်းငါးရာ ကျော်လာပြီဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါသောကြောင့် ဆရာတော်ဘုရားကြီ၏ သီလဂုဏ်၊ သမာဓိဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်တို့ ကို ကြည်ညိုကြသော တပည့်ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမများအနေဖြင့် ဘေသဇ္ဇဒါန ကျန်းမာရေးဆေးအလှူတော်အတွက် စွမ်းနိုင်သမျှ ကုသိုလ်တော် ပါဝင်လိုကြပါလျှင် အောက်ပါဖုံးနံပါတ်များသို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ကြပါကြောင်းကုသိုလ်အကျိုးမျှော်၍ အသိပေးနှိုးဆော်ကြေညာအပ်ပါသည်။
ံဦးအဂ္ဂဝရ (ခေတ္တ ဘန်ကောက်မြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ)
ဖုံးနံပါတ်။ ။+၆၆ ၈ ၁၄၃၉ ၄၅၉၆။
ဆန်စစ်ကရစ်ယူနီဗာစီတီ၊ ဗာရာဏသီ၊ အိန္ဒိယဓမ္မရက္ခိတ ဖြူးမဟာစည်၊ ရန်ကုန် နှင့်မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ဖြူးမြို့။
ဖုံးနံပါတ်။ ။ +၆၅ ၉၀၀၉၆၈၂၀၊ +၆၅ ၉၈၅၁၇၆၆၀
ံဦးစန္ဒာသီရိ၊ ဦးစန္ဒောဘာသအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ -ဓမ္မရက္ခိတဖြူးမဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ၊အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ကမာရွတ်ဘူတာအနီး၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - ၀၁-၅၃၀၀၆၈ ၊ ၅၀၁၈၄၆ (Ext- ၁၈၁) ၊ ၀၉၅၀ - ၁၇၅၅၄
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 1:39 PM
မနေ့ညက အိပ်မက် မက်ပါတယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ အခန်းတစ်ခုထဲ တစ်ယောက်တည်း ရောက်နေတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ့် တွေ့လိုက်ရတယ်။ ထူးဆန်းလွန်းစွာ အဲ့ဒီအခန်းတစ်ခုလုံး မှန်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေခဲ့တာ။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ မှန်ရောင်းတဲ့ အရောင်းဆိုင် တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒါဆို ဒီအခန်းထဲက မှန်တွေက………
စ,စချင်းမှာတော့ ပျော်ရွှင်သွားမိတယ်။ ကိုယ်ပြုံးရင် ပြန်ပြန်ပြုံးပြတတ်တဲ့ ဒီမှန်တွေကို ချစ်ကြည်နူးစွာ စွဲလန်းစိတ်နဲ့ပါ။ စူးစမ်းလိုစိတ်၊ စိတ်ဝင်စားမှုပေါင်းများစွာနဲ့ ဒီမှန်အခန်း တစ်ခုလုံးကို အနု(ဏု)လုံ ပဋိလုံ လှည့်ကြည့်နေခဲ့မိတယ်။ မှန်ဘီလုံးခုံးဆိုလား မှန်ဘီလူးခွက်ဆိုလား ပြန်စဉ်းစားနေမိသေးတာပေါ့။ တီချယ် ဒေါ်ပို သင်တဲ့ Laws of reflection လား laws of refraction လား။ ပုံရိုက်ဒေါင့် ဖိုကယ်လန့် ဆိုတာတွေနဲ့ ငယ်တုန်းက အသေအလဲမှတ်ခဲ့ရတဲ့ ပုံရှစ်ပုံကိုတွေးပြီး တစ်ချက်ရီမိသွားတယ်။ အသံထွက်အောင်ရီမိပေမယ့် မှန်တွေထဲက ပုံမှာ အသံတွေပါမနေခဲ့ဖူး။ နောက်တော့ နှစ်တန်း (ဒုတိယနှစ်)မှာ တီချယ်ဒေါ်သီတာနဲ့အတူ ပုစ္ဆာတွေကို ပုံဆွဲတွက်ခဲ့ဖူးတာမြင်ယောင်မိတယ်။ သားကနယ်ကမို့ သားကို အတန်းတစ်ခုပေးမယ်နော် ဆိုတဲ့ ချစ်စဖွယ်တီချယ့်ကို သတိရသွားမိပြန်ရော။ တီချယ်ဒေါ်အေးလှအတန်းတွေမှာ ကျနော်ဝင်လို့ မရခဲ့တာ နယ်အိမ်က ပြန်လာတာ နောက်ကျနေတာမို့လေ။ ပြီးတော့ တီချယ်လဲ့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ။ ယူနီဖောင်းနဲ့ တီချယ့် အမျိုးသားကို ကြည့်ရင်း စာသင်ကောင်းတဲ့ တီချယ်လဲ့ကို ပြန်မြင်ယောင်မိပြန်ရော။ မှန်တွေနဲ့ အလင်းတွေဆက်စပ်ပြီး တီချယ်တွေကို သတိရနေတဲ့ အဖြစ်တွေကို မှန်တွေထဲမှာ ပြန်ကြည့်နေမိတယ်။ ပြန်စိုက်ကြည့်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံကလွဲရင် မှန်တွေထဲမှာ ဘာကိုမှ မတွေ့ခဲ့ရပြန်ဘူး။
နောက်တော့ အလုပ်ခွင်ဖယ်ရီကားပေါ်က မှန်တစ်ချပ်နဲ့ အမြဲအလုပ်ရှုပ်နေတတ်တဲ့ အပျိုကြီးတစ်ယောက်ကို စနောက်နေကျဆိုတာ တွေးမိသွားပြန်တယ်။ ဖယ်ရီပေါ်ရောက်မှ တို့ဖတ်လေးရိုက် ဘာလေးညာလေး လုပ်တတ်တဲ့အပျိုလေးတွေထက် သာလွန်စွာ မနက်ခင်းတိုင်း ဖယ်ရီပေါ်မှာ အလှပြင်နေကျ သူကတစ်မူထူးခြားလွန်းတယ်လေ။ ဒီတစ်ခါတော့ စိတ်မထိန်းနိုင်စွာ ကျနော်ရီနေကျ ထုံးစံအတိုင်း တဟားဟား အော်ရီမိတော့တယ်။ အရုပ်တွေကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ မှန်တွေက မတုန်မလှုပ် ဒီအတိုင်း တည်ရှိနေပြန်တယ်။ လှုပ်ရှားမှုသိပ်ပြင်းရင်တော့ မှန်တွေတည်ရှိနေတဲ့ နံရံတွေကြောင့် မှန်တွေလှုပ်ကောင်းလှုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသံတွေတော့ မပြန်နိုင်တာ သေချာလွန်းပါလား။
နောက်တော့ ဒီမှန်အခန်းတစ်ခုလုံးမှာ ကျနော်တစ်ယောက်တည်းဆိုတာ စဉ်းစားမိလာတယ်။ ပတ်ပတ်လည် မှန်တွေကြားမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း။ အရှေ့တုန်းက ရီနေမိပင်မယ့် အခုတော့ သွေးပျက်စွာ ခြောက်ခြားစ ပြုလာခဲ့ပြီ။ ကျနော်ရီရင် မှန်အချပ်တိုင်းက လိုက်ရီနေတော့တာ။ သူတို့တွေ ကျနော့ကို လှောင်ပြောင်နေကြတာလား။ မှန်ချပ်တွေရဲ့ အမှန်တရားက ဘာတဲ့လဲ။ တည့်မတ်စွာ ပြန်လည်ပြသနေတာ အမှန်လား။ ဒါဆိုမှန်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာကော။ တကယ်တမ်းက ကျနော့မှာ ကြောက်လန့်တတ်တဲ့စိတ် ရှိမနေတတ်ပင်မယ့် မှန်တွေရဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းတရားတွေကြောင့် ကျနော့လက်ဖျားတွေ အေးစက်လာပါတယ်။ ii နဲ့ ii’ မှာ ကျနော်မြင်နေရတာက ဘယ်အရာလဲ မသဲကွဲတော့ပါဘူး။ မျက်စေ့ကို အသေအချာပွတ်ပေမယ့် မှန်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်ကို ကျနော်သွားလို့ မရတဲ့နောက် အတည့်အတိုင်းမြင်နေရတာလားဆိုတာ ကျနော် မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ပါဘူး။
မှန်တစ်ချပ်နောက်ကို သွားဖို့ ကျနော်အပြင်းအထန်ကြိုးစားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်သွားလို့ မရပါဘူး။ မှန်တွေက အချင်းချင်းပိတ်ဆို့ထားကြတယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို့တွေအလစ်ကို ကျနော်စောင့်ကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့် မရဘူးဗျာ။ သိချင်စိတ်နဲ့အတူ ဇောချွေးတွေ စို့လာမိတယ်။
မှန်တစ်ချပ်ကို ကျနော်ချခွဲကြည့်သင့်သလား။ အနီးဆုံးမှန်တစ်ချက်ကို ကျနော် လက်သီးနဲ့ ထိုးခွဲချလိုက်တယ်။ ဘယ်တော့မှ အသံပြန်မကြားရတတ်တဲ့ မှန်တွေဆီက ခွမ်းဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ ကျနော့လက်က ပူခနဲဖြစ်သွားတယ်။ နောက်တော့ သွေးတွေဖြာနေတဲ့ လက်ဖမိုးတစ်ခုကို မှန်ချပ်တိုင်းမှာ မြင်ရပြန်တယ်။ ကွဲသွားတဲ့မှန်ကို ကျနော်မတွေ့ရပေမယ့် အခန်းထဲမှာ သွေးစက်တွေက အတိုင်းသား…….
နာကျင်မှုတွေကြောင့် ဒီအိပ်မက်ကနေ နိုးထဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ကျနော် မြင်နေရတဲ့ မှန်ချပ်တွေက ကျနော့ အသိမိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်သွားကြတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော် မရီပါပဲ ကျနော့ကို ၀ိုင်းပြီး ဟားတိုက်ရယ်မောနေကြတယ်။ ဟင့်အင်း မှန်တွေပါ မင်းတို့တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေ ရီနေကြတုန်း………..
ဒီမနက် ကျနော် အိပ်မက်ကဘယ်လိုနိုးခဲ့သလဲ မသိတတ်တော့ ။ မျက်နှာသစ်ရင်း မှန်ကို ကြည့်တော့ လက်ဖမိုးက အမွှေးတွေထောင်လာတယ်။ ဒါဆို………ကျနော် မှန်ကြောက်နေပြီလား……………………..ခက်ပြီ………….
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 2:26 PM 16 comments Links to this post
တစ်စုံဆိုတာနဲ့ ဘယ်နဲ့ညာ ဒါမှ မဟုတ် အရာဝတ္ထု နှစ်ခုပေါ့…
ဒီနိုင်ငံမှာစရောက်ကာစက ခရုခွံဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်ကို ဖော်ဝပ်မေးကနေ ရဖူးတယ်။ အခုတွေးနေမိတာက အဲ့ဒီခရုခွံအခန်းလေးထဲက ဘယ်နဲ့ညာလေးတွေ အကြောင်းပါ………….
ဒီမှာနေစရိတ်ကသိပ်ကြီးလွန်းတယ်။ အခန်းတွေအလိုက် နေရာအနီးအဝေးအလိုက် လူစည်ကားတဲ့ဒေသအလိုက် ဈေးတွေကလည်း များမှများဗျာ။ တစ်ခန်းလုံးကို တစ်ယောက်တည်း နေဖို့အရေးက တကယ့် သူဌေးသူကြွယ်လို။ ခရုခွံထဲက အခန်းလေးထဲမှာတောင် ဘယ်တစ်ကန့် ညာတစ်ကန့် နေရတဲ့ဘ၀တွေပါလေ။
ညာဖက် - ညဖက်မီးမမှိတ်ရင် မအိပ်တတ်ဘူး
ဘယ်ဖက်- မီးပိတ်ရင် သရဲကြောက်တယ်
ညာဖက်-အိပ်ရင် အသံမဆူမှ အိပ်တတ်တယ်
ညာဖက်-ဖုံးပြောရင် တိုးတိုးသက်သာ မပြောဘူး
ဘယ်ဖက်-chatting တက်မယ် game ကစားမယ် ညလုံးပေါက်
ညာဖက်- အဲယားကွန်းနဲ့မှ အိပ်တတ်တယ်
ဘယ်ဖက်-ရုပ်ရှင်ကားကို အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ကြည့်မှနားလည်မှာ
ဘယ်ဖက်-ကြိုက်ရင်ကြိုက် မကြိုက်ရင်နေ ကိုယ်ကတော့ ဒီလိုပဲနေတတ်ပြောတတ်တယ်
ဘယ်ဖက်-ကိုယ့်အကြောင်းတွေ သူများ ပြောစရာလား
ညာဖက်- အမြင်မတော်လို့ပြောတာပါ ဆရာလုပ်တယ်မထင်နဲ့နော်
ဘယ်ဖက်-သူက ဘာမို့လို့လဲ လစာဘယ်လောက်ရသလဲ အတူတူချင်းကို တစ်လုံးပိုမရှူချင်ပါနဲ့
ညာဖက်-တို့က အကောင်းစား Branded မှ ၀တ်တာစားတာ
ဘယ်ဖက်-ဒါကြောင့် လမကုန်ခင် ပိုက်ဆံကုန်တာ
အစကတည်းက ညာဖက်ချည်းမရှိခဲ့ဘူးလေ။ ဘယ်တစ်ဖက် ညာတစ်ဖက်ပေါ့။ ဘယ်ဖက်နဲ့ ညာဖက်ဆိုကတည်းက ထပ်တူကျဖို့ မရှိတော့။ ညာကလည်း ညာအလျှောက် ဘယ်ကလည်း ဘက်အလျှောက်။ ဘယ်နဲ့ညာကို ထပ်တူကျဖို့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဘယ်ရော ညာရော ညီညီညာညာ လျှောက်ရင် လိုရာခရီးရောက်နိုင်ပါတယ်။
အရာအားလုံး မိမိစိတ်တိုင်းကျချည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ်တောင် စိတ်တိုင်းကျဖို့က ခဲယဉ်းသား။ သူတစ်ပါးလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ဖြစ်မှာပါပဲ။ အဲ့ဒီတော့ ဘယ်က ဘယ်ဖက်ကိုပဲ လျှောက်မယ် ညာကလည်း ညာဖက်ကိုပဲ လျှောက်မယ်ဆို ကို့ယိုးကားယားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီရောက်စကတည်းက အဲ့ဒီ ညာဘယ်ကိစ္စတွေကို ကြားနေနှင့်တာ။ တစ်ချို့ညာဘယ်လေးတွေဆို အခုဆို အဝေးတစ်နေရာစီမှာ။ လမ်းမှာတွေ့ရင်တောင် မေးမငေါ့ ခြေမထိုး ပါးစပ်မဟတော့ဘူး။ ကျောင်းတုန်းက အချစ်ဆုံးဘယ်ညာလေးတွေတောင် အဲ့လို ကတ္တီပါလမ်းခွဲတွေလုပ်လာကြတယ်တဲ့။
ဒီမှာက Pressure များတယ်။ အိမ်မှာပဲ နားနားနေနေ နေချင်တာ။ အခန်းဖော်က ဘယ်လို ဘယ်ချမ်းသာ စသည် စသည် အသံလေးတွေက ဟိုတစ်စ ဒီတစ။ မိဘအိမ်မဟုတ်သလို ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစုနဲ့နေကြရတာမဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်ထဲက ပင်ပန်းသမျှတွေအတွက် အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြရဖို့ပါ။ တနေ့ကို မတွေ့ဘူးဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံးတော့ သုံးလေးခေါက်လောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖို့များတဲ့ ဒီညာဖက်နဲ့ ဘယ်ဖက် တည့်တည့်မှတ်မှတ် မရှိ လုပ်သမျှအပြစ်မြင် ပြောသမျှ မကောင်းထင်နေရင် ဘယ်လိုလုပ် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတော့မှာလဲ။
ကျနော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က တစ်ယောက်တည်းနေပါတယ်။ လွတ်လပ်မှု privacy အပြည့်နေလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ခါ ပျင်းရိငြီးငွေ့စရာကောင်းတယ်တဲ့။ သူရဲ့ ညာဖက် ဒါမှမဟုတ် ဘယ်ဖက် သူငယ်ချင်း အဖော်တစ်ယောက်လောက်နဲ့ဆို ပျော်စရာကောင်းမယ်နော်လို့ ပြောပါတယ်။
ကျနော့မှာတော့ ဘက်ဖက်ကလေးရှိပါတယ်။ ကျနော့ဘယ်ဖက်ကလေးနဲ့ တစ်နှစ်ကျော်ကာလအထိ နေခဲ့ဖူးပြီ။ ကျနော်တို့ကြားမှာ တိုက်ဆိုင်တာရှိသလို အကြိုက်မတူတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင် ဖြစ်ရလောက်အောင်အထိ မရှိခဲ့ဖူးဘူး။ သေးသေးမွှားမွှားလေးတွေကိုတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင် ဒါမှမဟုတ် ဥပေက္ခာပြုထားလိုက်တယ်။ တစ်ချို့အကြောင်းအရာတွေကို အရမ်းမကြိုက် မနှစ်သက်ဖူးဆို မကြိုက်တဲ့အကြောင်း ပြောဖြစ်တယ်(ကျနော်ပဲ ပြောတာဖြစ်မယ်၊ ဘယ်ဖက်က ကျနော့ထက်အသံတိတ်တယ်)။
ကိုယ်ကိုတိုင်တောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် တစ်ခါတစ်လေ မကျေနပ်နိုင်တာ။ အရာအားလုံးကိုယ့်အကြိုက်ဖြစ်ဖို့က ခက်ပါတယ်။ တစ်ချို့အကြောင်းအရာတွေကို ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာ အလိုက်သင့် အလျားသင့် နေထိုင်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
ရေခြားမြေခြားမှာ ခရုခွံလေးထဲက အခန်းငယ်လေးမှာ နေရတာပါ
ဦးတည်ချက် ယုံကြည်ချက် တစ်ခုခုအတွက် ရပ်တည်လုပ်ကိုင်နေကြတာပါ
ဘ၀သက်တမ်းတိုတိုလေးအတွင်းမှာ အချိန်ရသခိုက် အခွင့်အရေးရတုန်းလေး ဘယ်ညာ ညီညီလျှောက်ပြီး ပန်းတိုင်တွေကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းသင့်ကြတယ် မဟုတ်လားခင်ဗျာ..
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 8:40 PM 26 comments Links to this post
ဘာရယ်မဟုတ်ပေမယ့် ကောင်းကင်ပြင်မှာ စွန်တွေ တွေ့ခဲ့ရသည်။ စွန်လွှတ်တမ်း ကစားနေကြသည်လား သို့မဟုတ် စွန်လွှတ်ခြင်းဖြင့် စိတ်အဆာဖြေနေကြသည်လား ကျနော် မခွဲခြားတတ်ပါ။ ကောင်းကင်တွင် ပျံဝဲနေသော စွန်တွေကို ကြည့်နေရင်း ကျနော် စွန်မလွှတ်တတ်ပါလားဆိုသည်ကိုတော့ တခဏတွေးတောမိသွားပါတော့သည်။
စွန်လွှတ်တာများလွယ်လွယ်လေး..အင်း ပြောအားရှိသူများ ပြောနိုင်ကြပါလိမ့်မည်။ ကျနော့အတွက်တော့ စွန်လွှတ်ခြင်းအတတ်ပညာကို ယခုအချိန်အထိ (ယခုအသက်အရွယ်အထိ ဆိုရင် ပိုမှန်မည်ထင်ပါသည်) တတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
စွန်လွှတ်ရန် စွန်တစ်ခု ရစ်ဘီးတစ်ခု ထို့အတူ စွန်လွှတ်မည့်သူနှင့် စွန်ကို ဆက်သွယ်ရန် ကြိုးတစ်ချောင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ စွန်ကို အမြင့်သို့ပင့်တင်ပေးရန် လေကြောင်းတစ်ခုသည်လည်း ထိုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှိကိုရှိနေရပါမည်။ ထိုအရာများ မပြည့်စုံပါက စွန်လွှတ်ခြင်း အထမြောက်မည် မဟုတ်သည်တော့ သေချာလှပါသည်။
ထို့နောက်တွင်မူ အမြင့်သို့ တဖြည်းဖြည်းလွှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လွှတ်တင်ရာတွင်လည်း ဆက်သွယ်ထားသောကြိုးကို အစွမ်းကုန် လျှော့ပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မိမိစွန်ပါသွားမည်စိုးသဖြင့် ကြိုးကို အတင်းဆွဲကိုင်ထားခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း စွန်ကို အမြင့်ရောက်စေမည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါနည်းများသည် စွန်လွှတ်သူနှင့်စွန်ကို ဝေးကွာအောင်လုပ်သည်နှင့် တူလှပါသည်။
သို့ဖြစ်ရာ စွန်နှင့်လေကြောင်း ထပ်တူကျရန် စွန်လွှတ်ခြင်း အတတ်ပညာသည် အဓိက ကျနေပြန်၏။ လေကြောင်း အတိုင်း မိမိစွန်ငယ် ထောင်လျက်တက်သွားသည်ကို ကြည်နူးစွာ ရှုမြင်ရခြင်းသည် စွန်လွှတ်ရသည့် အနှစ်သာရပင်လော။
တွေးနေတုန်းအခိုက်မှာပင် ကျနော့ရှေ့ရှိစွန်ငယ် သည် တစ်ခြား စွန်ငယ်နဲ့ သွားရောက် ငြိတွယ်နေပြန်သည်။ စွန်လွှတ်သူနှစ်ယောက် တစ်ယောက်စွန်ကို တစ်ယောက် ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ရင်း ကြိုးနှစ်ချောင်းရှုပ်ထွေးစွာ ပူးမသွားဖို့ ကြိုးစားနေကြသည်မှာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြန်သည်။
စွန်ဖြတ်ခြင်း ဆိုသော ဝေါဟာရနှင့်အတူ ငယ်ငယ်တုန်းက တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်မှ စွန်ဖြတ်ပွဲများဆီ သတိရသွားမိပြန်သည်။ ကြိုးကို မှန်စာတိုက်၍ မိုးကောင်ကင် စွန်တိုက်ပွဲများ…………………….စွန်လွှတ်ခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် မပြည့်စုံ ပြန်သေးပါကလား။ ကျုးကျော်သူ စော်ကားအနိုင်ကျင့်သူများသည် စွန်များတွင်လည်း ပါနေပြန်၏။ ထိုအခါ ကာကွယ်ခြင်း ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခြင်း များလည်း ပူးတွဲပါလာသည်ကောလေ။
နောက်တော့ စွန်အလှလွှတ်နေသူတစ်ဦးကို အာရုံရောက်သွားပြန်သည်။ ကြိုးတစ်လျှောက် အကွာအဝေးတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြားတွင် မီးလုံးငယ်လေးများ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်ဖြင့် ထိုသူ၏ ခံစားမှုကိုလည်း ကျနော် ချောင်းကြည့်ခဲ့မိပြန်သည်။ သူကိုင်သောရစ်ဘီးမှာ ကျနော်တို့ဆီကလို မဟုတ်ပဲ လက်ချောင်းလေးများထိုး၍ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသော လှပသော ရစ်ဘီးတစ်ခုလည်း ဖြစ်နေပြန်သေးသည်။
ကောင်းကင်ပြင်တွင် စွန်ရောင်စုံများဖြင့် လှပနေကြသည်။
စွန်တစ်ခုမျှ ကျနော်နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ အကြောင်းအရင်းမှာ ကျနော်စွန်မလွှတ်တတ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
မှောင်စပျိုးလာသဖြင့် တက်နေသောစွန်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ချနေကြသည်။ ကြိုးကို ရစ်ဘီးတစ်လျှောက် အလိုက်သင့် ရစ်သိမ်းရင်း စွန်ကိုပါ ခေါက်သိမ်းနိုင်သည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။
စွန်မလွှတ်တတ်သော ကျနော်သည် ကျနော့စိတ်အစဉ်ကို စွန်တွေနဲ့အတူ လိုက်လွှတ်နေခဲ့မိသည်။ အခု ကျနော်လည်း စိတ်စွန်ကို ပြန်သိမ်းဖို့ကြိုးစားကြည့်သည်။ ဘယ်စွန်နဲ့ ငြိလေသည်လည်း မသိ။ ဆက်သွယ်ထားသောကြိုးကို ထိန်းရန် ကျနော် ရစ်၍ မရ။
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 1:30 PM 36 comments Links to this post
ကျနော်စောင့်နေတာလည်း နောင်နှစ်နှစ်အတွက်ပဲ။ ကျနော်နေခွင့်ရခဲ့တာလည်း နောင်နှစ်နှစ်တည်းအတွက်ပဲ။ နောက်နှစ်နှစ်ပြီးရင် ကျနော့ ကမ္ဘာ မရှိတော့ပါဘူး…
ဒါပေမယ့် နောင်နှစ်နှစ် အထိမစောင့်လိုက်ရပါပဲ ကျနော့ကမ္ဘာ ပြိုပျက်သွားခဲ့တာ။ ဝုန်းခနဲမြည်လိုက်သလား ဟင့်အင်း ဘာသံမှကို မကြားလိုက်ရဘူး။ တိုးတိုးလေးကြားတဲ့ အသံတစ်ခု…မဖြစ်နိုင်ဘူး..ဒါ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
နှစ်နှစ်တာကာလပြီးရင် ကျနော့ကမ္ဘာပျက်မယ်ဆိုတာ ကျနော်ကြိုသိနေခဲ့ရတယ်။ မတွေးချင်ဘူးဆိုတဲ့အသိနဲ့ ခေါင်းကိုယမ်းလိုက်တိုင်း ပါးနှစ်ဖက်မှာ မြစ်တွေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီကမ္ဘာကို စတည်ဆောက်ခဲ့ကတည်းက ပြိုကွဲဖို့မှ မဟုတ်ခဲ့တာ။ ကြိုသိတဲ့နောက် နေ့နေ့ညညတွေကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ရမလဲ။ အနားက တစ်စုံတစ်ခုကိုလှမ်းဆွဲဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ကံဆိုးတယ် ရေနစ်သူ ဝါးကူလို့ထိုးတတ်တယ် မဟုတ်လား….
သေမှာကိုကြောက်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ သေခြင်းကို ရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ပြင်ပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် နှလုံးသားစိတ်အလိုကိုတော့ မထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ဖူး။ တရားကိုလက်ကိုင်ထားပေမယ့် နှလုံးသားတရားကို နာကြားဖို့ချည်းဖြစ်ဖြစ်နေပြန်တယ်။
အကြိမ်ကြိမ်ဆုတောင်းခဲ့တယ် ကမ္ဘာမပျက်ခင်မှာပဲ ကျနော်သေပါရစေလို့။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ မခွဲခွာနိုင်လို့ပါပဲ။ ဘယ်အရာကိုမှ မစွန့်လွှတ်နိုင်လို့ပါ။ ပုထုဇဉ်ပီပီ ကိလေသာ အမိုက်မှောင်မှာ ချောင်ကြိုက်နေတုန်းလေ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အလိုချင်ဆုံးဆုက အဲ့ဒီနှစ်နှစ်တာကာလ မတိုင်ခင် ကျနော်ဒီကမ္ဘာပေါ်က ပျောက်ဆုံးသွားဖို့ပါပဲ။
အခုတော့ အချိန်မစေ့ခင် ကမ္ဘာက ပြိုနှင့်ခဲ့ပြီ။ ကမ္ဘာပြိုပြီဆိုမှတော့ ကျနော်အသက်ရှင် ကျန်ခဲ့ပါဦးတော့မလား။ မပြိုခင်ကတည်း ဆုတောင်းပင်မယ့် ဆုတောင်းကလည်း မပြည့်ဝခဲ့။ အင်းလေ ဆုတောင်းတိုင်း ပြည့်တယ်ဆိုတာကလည်း ရှားပါးဘိချင်း။ တောင်းခဲ့ဖူးတာပေါ့ ဆုတွေ အသက်နဲ့တွက်စစ်ရင်တောင် အသက်ရဲ့ အဆပေါင်း အထောင်အသောင်း။ ဘယ်နှစ်ခုများ ပြည့်ဝခဲ့ဖူးသလဲ။
အချိန်ရရင် ဘာတွေပြင်ဆင်မိမလဲ။ သေချာတယ် ကျနော်ဘာကိုမှ ပြင်ဆင်မိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်လုပ်ချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ချို့ကို လက်ကျန်ဆယ်ရက်နဲ့ကျနော်ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးမှာ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်လုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်ဆိုတာ ဘယ်သူက ဆန်းစစ်ပေးမတဲ့လဲ။ ကမ္ဘာပြိုပြီဆိုမှတော့ ဒီအရာတွေကို ဘယ်သူမှ လှည့်ကြည့်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မေးခွန်းတွေ ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့ အင်အား ကျနော့မှာမရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီစာကို ကျနော့နောက်ဆုံးထွက်သက်နဲ့ ရေးနေရလို့ပါ။ ဖတ်ရတာ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ကျနော်တောင်းပန်ပါတယ်။ သေခါနီးကမှူးရှူးတိုးရေးတာမို့ သွေးပျက်နေတာကို အတိုင်းအသားမြင်ရမှာမို့ပါ။ စာအဆင်ချောဖို့ အကြောင်းအရာအဆင်ပြေဖို့….ဘာကို မှ မတွေးဆနိုင်တော့ဘူး။ အသိဥာဏ်လေးရှိနေတုန်းမှာ ဖျတ်ခနဲပေါ်တာလေးတွေ ရေးပါရစေ………
အားလုံးဟာ ဖြစ်တတ်ပျက်တတ်စမြဲပါ။ ဘယ်တော့ပျက်မလဲဆိုတာကို စောင့်နေရတာ ကျနော့ဘ၀တစ်ခုပါ။ ပျက်လာခဲ့ရင် ခံနိုင်ရည် မရှိဖို့က ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်များပါတယ်။ တရားမချပါနဲ့ ကျနော်တရားမရနိုင်ပါဘူး။ ကျနော်လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ တရားမချပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်တရားမရနိုင်တဲ့နောက် ဘယ်သူ့ကို ဖြေသိမ့်ပေးနိုင်မှာတဲ့လဲ။
ဖြစ်နိုင်လား မဖြစ်နိုင်လား စိတ်ပူနေတဲ့သူတွေကိုလည်း တစ်ခုတော့ ဆိုခဲ့ချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘာသာတရားအရ နောင်ဘုရားတစ်ဆူပွင့်ဖို့ ကျန်နေပါသေးတယ်။ ဒီဘဒ္ဒကမ္ဘာမှာ ပွင့်မယ့် ဘုရားမတိုင်ခင် ကမ္ဘာ ပျက်မယ်ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့တော့ ယူဆမိပါတယ်။ ဒီအချက်ကလည်း ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်လေ။
နောင်နှစ်နှစ်မတိုင်ခင် ကျနော့ကမ္ဘာက ပြိုနှင့်ခဲ့တာမို့ နောင်နှစ်နှစ်ကို ကျနော်မရောက်မသိ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်ဒီကမ္ဘာနဲ့အတူ လိုက်ပါ ပျောက်ဆုံးသွားပါတော့မယ်။ နောင်နှစ်နှစ် အထိ အားလုံးနဲ့အတူ မစောင့်နိုင်တဲ့အတွက်တော့ အပြစ်မတင်ကြလောက်ပါဘူးနော်…………..
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 2:08 PM 31 comments Links to this post
ကျနော့ရဲ့ Y နဲ့ရ
ဒီပို့စ်ကို facebook မှာ ကဗျာဆရာကိုမောင်လေးလင်းဒီပ ကပထမဆုံး TAG ပါတယ်
ဒုတိယအနေနဲ့ ကိုမိုးကုတ်သားက ရေးပေးပါဆိုပြီး TAG ပြန်တယ်
တတိယကတော့ အမတန်ခူးက ထပ်မံ TAG ပြန်တာမို့.......
1. What is your name : Ywar Thar Lay
2. A four Letter Word : Yarn
3. A boy's Name : Yuri
4. A girl's Name : Yuki
5. An occupation : Yawning Person
6. A color : Yellow
7. Something you'll wear : Yesterday Clothes
8. A food : Yakisoba
9. Something found in the bathroom : You.. Yourself
10. A place : Yugoslavia
11. A reason for being late : You…(because of you…)
12. Something you'd shout : Yeah... Yellow Card…
13. A movie title : You've Got Mail
14. Something you drink : Yogurt
15. A musical group : yachts
16. An animal : Yak
17. A street name : York Street
18. A type of car : Yaris
19. The title ofasong : You are my no. one
20. A verb : Yelling (to the Boss)
1. What is your name : ရွာသားလေး (၀ိုင်တီယူ)
2. A four Letter Word : ရရစားစား
3. A boy's Name : ရိမ်မိုး
4. A girl's Name : ရနံ့
5. An occupation : ရွာသူကြီး
6. A color : ရွှေအိုရောင်
7. Something you'll wear : ရိုးတိုက်ထုတ် ၀တ်စုံ
8. A food : ရှမ်းစာ
9. Something found in the bathroom : ရေ
10. A place : ရွာတန်းရှည်
11. A reason for being late : ရှင်းမရအောင် ရှုပ်နေလို့
12. Something you'd shout : ရွှေး ရွှေး ပြန်ပေတော့…
13. A movie title : ရတနာပုံ (ကြည်ကြည်ဌေးကို ကြိုက်လို့)
14. Something you drink : ရေသန့်…
15. A musical group : ရွှေသံစဉ်
16. An animal : ရေမြင်း
17. A street name : ရေနံ့သာ
18. A type of car : ရိုးလ်စ်ရွိုက်
19. The title ofasong : ရာသီပြောင်းချိန် (လွမ်းတယ်တစ်အားပဲ)
20. A verb : ရွာလည်နေသည်၊ရေချိုးနေသည်(အထဲဝင်မလာနဲ့နော်)
ကူညီခေါင်းစားပေးတဲ့ လမ်းမတော်က အမကြီးခပ်ချောချော သဘောကောင်းကောင်းကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.......
Posted by ရွာသားလေးဝိုင်တီယူ at 1:12 PM 12 comments Links to this post
ဖြူးဆရာတော်ဘုရား ဘဒ္ဒန္တနရပတိအား စင်္ကာပူမှ လှူဒါန်းငေ...
အမှတ်တရ ဘဝခရီး (162)
အလုပ်လုပ်ရင်း ကစားလို့ရတဲ့ ပျော်စရာ ဂိမ်းတွေ - ဂိမ်း ဆိုတာကို လွယ်လွယ်ပြောရရင် ကစားနည်းတွေပေါ့။ ဂိမ်းဆိုတဲ့ ကစားနည်းတွေကို ကစားကြတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ အပျော်သဘောနဲ့ ကစားကြသလို ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ သူ့ထက်ငါ အ...
" စိတ်ကူးယဉ်ကြရအောင်လား ဂျွန်ရေ…" - ဘယ်သူဟာ သေခြင်းအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်လဲ စဉ်းစားရင် ပထမဆုံး သတိရတာ.. ခင်ဗျားပါပဲ ဂျွန်.. Kurt Cobain လို သေခြင်းကို ကိုယ့်ဘာသာ မရွေးချယ်ခဲ့ပေမဲ့ အနုပညာ နဲ့ လူ...
BeingaBurmese Buddhist - When I was walking in the university campus, an old black man approached me and said hello. Afterapleasant greeting, he asked where I was from. When I an...
2011 memory - 2011 memory အဲသည် တစ် ရက် က Holiday ထဲ ဝင် တယ်မနက် မိုး လင်ူအ် ဒို နီးရှား သွား မလို့ မလေး ရှား ဘက် က သွား ရင် စေိး သက်ာတယ် ဒါ ပေမဲ့ စကာ ပူ မှာနေ တော...
Havana Blues - ကမ္ဘာ့ နံပတ်တစ် အရင်းရှင် နိုင်ငံကြီး ကို လက်တကမ်း အကွာက နေ ၊ ဘာမထီ စိတ်နဲ့ ရဲရဲကြီး ရန်ဖက်ပြု နေ ခဲ့တဲ့ ၊ ကမ္ဘာ့ နောက်ဆုံးလက်ကျန် ဆိုရှယ်လစ် ကျွန်းနို...
ဆံပင်ရှည်များမှတဆင့်…. - “ယောင်္ကျားတို့ ဘုန်းလက်ရုံး၊ မိန်းမတို့ ဘုန်းဆံထုံး” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားကို မသိနားမလည်ခင် အရွယ်ကတည်းက ဆံပင်ရှည်ရှည်တွေကို ကျွန်မက နှစ်သက်တတ်ခဲ့တာ ခုထိမှတ်...
ဧဒင်ဗရာရဲ့နွေ - အချိန်တန်လို့ လမ်းခွဲရမယ်ဆိုတော့လည်း... ကိုယ့်စိတ်မှာ မဖြေသာတော့ပါ အမှတ်တရများစွာ... လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေကြား မျက်နှာတွေကြား စကားသံတွေကြား တိုးဝေ့ရင်း... န...